Goobaha lugu hayo dadka dalka laga musaafurinayo oo xabsiyo u muuqaal eg | Somaliska
Xarrumaha ama goobaha lugu hayo dadka dalka laga musaafirinayo ee loo yaqaano flyktingförvar, ayaa qeeylo dhaan ka soo yeertay, ka dib markii la sheegay sida dadka halkaasi ku sugan loola dhaqmo ee ay yihiin kuwo eg sida xabsiyada.
Berigii hore ayaa xarrumahaasi waxaa la tilmaamay ineey ahaayeen xarrumo lugu dhiira gelin jiray ajaanibta siddii ay dalalkoodii dib ugu laaban lahaayeen, haatanse ay isu badashay xabsi lugu hayo dambiileyaal. Idaacadda raadiyo Iswiidhan qeybteeda wararka faafisa ee Ekot ayaa sidaasi ka soo xigatay shaqaale ka howl gala halkaasi.
“Dadka tarxiil sugayaalka ayaa xirin oo keliya halka kuwa dembiyada geeysta ay xor u yihiin, waxaan markii hore u shaqeeeyn jirnay siddii aan dadka halkaan ku sugan aan ugu dhaa dhacinlaheyn siddii ay dalalkoodii dib ugu laabban lahaayeen, hadase waa ku tuur oo ku xir oo keliya” ayuu yiri shaqsi ka shaqeeya xarrumahaasi oo idaacadda u waramay. Idaacada ayaa sidoo kale sheegtay in ay wareeysatay tobbaneeyo ruux oo dalka oo dhan xarrumihiisa ka howl gala, kuwaas oo dhamaantood u sheegay in xaaladda xarruumaha lugu hayo dadka tarxiilka sugayaalka ah ay ka soo xumaatay sidd hore.
” Dadkeeni muddada dheer ka soo shaqeeyey xaaladeena ma wanaagsaneyn, waxaannu la soconey oo aannu soo dhisnay wax duwan oo lahaa yool kale” ayuu yiri shaqsi kale oo idaacadda u waramayey.
Sanadku markuu ahaa 1997-dii ayaa, laanta socdaalka, waxaa ay hoowlaha xarrumaha tarxiilka kala wareegtay booliska, sababa la xirriira in howlahaasi ay yihiin kuwo aan salka ku heeyn dambiyo aan booliskaga looga baaheyn. Balse ay il wareedyashu sheegayaan in xarruumuhu aay u sii muuqanayaan xabsiyo.
” Waxaa haboonaan laheyd in hoowlaha aan heeyno lugu wareejiyo booliska, sababtoo sidaan u hoowl galno aawgeed” ayuu hadana yiri shaqsi kale oo idaacaddu wareeysatay isagoo farta ku fiiqay in goobaha tarxiilka ajaanibta ay u sii muuqaneeyso marba marka ka dambeeysa xabsiyada dadka dembiyada geeysta lugu hayo.
Balse laanta socdaalka ayaa iska difaacdey eedeymaha ka yeeraya shaqaalaha ka howlgala xarruumaha tarxiilka ajaanibta. Torbjörn Nyberg, waa madaxa laanta socdaalka ee u qaabilsan xarrumaha tarxiilka ajaanibta waxaa uu sheegay in la sameeyey qorsheyaal dhinacyio badan leh oo qaarkood ammaanka lugu sugayo.
“Qofna kama qaadi kari xaalad dareen ah oo uu soo arkay, balse tan waadixa ahi waa in haddii gacanta lugu hayo howl la xirriirta amaanka shaqsi xorriyadiisa laga qaaday, waxaa haboon in la suggo amaanka goobta ” ayuu yiri Torbjörn Nyberg oo difaacayey sida ay u howl galaan.
Ugu dambeyntii wuxuu sheegay in sanadkii 2014-tii, ay laantu socdaalku baaris ku sameeysay goobo la sheegay in ammaan aheyn, balse la ogaaday ineeysan aheyn oo iyadu shaqaaluhu arkeyn laga baxsan karo sidoo kalene shaqaalaha ku adkeyd sideey u howl gali lahaayeen haddii xaalad adagi soo wajahdo.Wuxuu sidoo kale tilmaamay in la sameeyey qorsheyaal sugayo ammaanka, welina ay halkeedii tahay dhiiragelinta la siinayo dadka halkaasi ku xiran siddii ay dalkoodii hooyo dib ugu laaban lahaayeen.
“Macquul miyaa in reerkiisa loo keeno nin isagu cayr qaata?”